laacib » Miyey Barcelona Lasoo Saxiixaneysaa Philippe Coutinho Bisha January? Madaxa Fulinta Oscar Grau Ayaa Ka Jawaabaya.
Miyey Barcelona Lasoo Saxiixaneysaa Philippe Coutinho Bisha January? Madaxa Fulinta Oscar Grau Ayaa Ka Jawaabaya.
Madaxa fulinta Barcelona Oscar Grau ayaa difaacay xaaladda dhaqaale ee Barcelona isagoo si weyn u farxad galiyay jamaahiirta Balaugrana madama uu ka dhawaajiyay iney diyaar u yahiin saxiixa Philippe Coutinho bisha January.
Waxa aan shakiga ku jirin waa in Liverpool aysan soo dhaweyn doonin arinta uu ka dhawaajiyay Oscar Grau, balse Barcelona waxey dooneysaa iney u dhaqaaqdo marka uu furmo suuqa jiliilka xitaa hadii aysan Reds badaleynin maankeeda.
“Waxaan diyaar u nahay inaan lasoo saxiixano Coutinho, iyo xidig walba oo kale bisha January” ayuu yiri isagoo ka hadlayay shirka jaraa’id ee looga hadlayay xaaladda dhaqaale ee laacibkii.
“Xitaa hadii aysan kooxaha rajeyneynin iney iibiyaan, waxaan dooneynaa inaan isku dayno keenista ciyaartoydaay maamulka u arkaan in loo baahan yahay”
Barcelona waxey ku dhawaaqday iney heleen daqli rikoor ah kaas oo dhan 708 Malyan oo Euro ololahii lasoo dhaafay, taasoo u ogolaatay in la saadaaliyo miisaaniyad dhan 897 Malyan oo Euro ololaha 2017, waana miisaaniyadii ugu badnaa ee laacibkii soo gala taariikhda.